[22 / 03 / 2020] သမ္မတ၏အမိန့်တော်ဖြင့်ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းနှင့်ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှု!	coronavirus
[21 / 03 / 2020] 21.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ	coronavirus
[21 / 03 / 2020] စားသောက်ဆိုင်များရှိဇယားများကိုသာယူရမည်	အထွေထွေ
[21 / 03 / 2020] အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူများနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများကိုလမ်းမှတားမြစ်ထားသည်	အထွေထွေ
[21 / 03 / 2020] 20.02.2020/XNUMX/XNUMX တူရကီ coronavirus အစီရင်ခံစာ	အထွေထွေ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ထမ်းများအတွက် EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှစီစဉ်သော“ အပြုအမူနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တက်တက်ကြွကြွပါ ၀ င်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အခွင့်မသာသောယာဉ်မောင်းအုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုတွင်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
တူရကီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအတွက်အချင်းချင်းမြို့ terminal ကိုလိုအပ်ချက်အဖြစ်စုဆောင်းမှုစင်တာများသကဲ့သို့ကောင်းစွာ, Şanlıurfaမြူနီစီပယ်အတွက်အရှည်ဆုံးလမ်းကွန်ယက်၏တဦးတည်းရှိပြီးတင်းကုပ်ထဲမှာအလုပ်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆက်လက်။ ပျမ်းမျှ ၁၈၀ ယောက်နှုန်း [ပို ... ]
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ် ၂၀၀ အားပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောDiyarbakır Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များရှိပြီးကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်လိုင်စင်ရရှိထားသည်။ [ပို ... ]
Marmaray ပျံသန်းမှုအကွာအဝေးလျော့ကျလာ .. ! မနက်ဖြန်တွင်လျှောက်လွှာအသစ်စတင်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan က Marmaray သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားများအားအလွန်စိတ် ၀ င်စားကာ Marmaray လည်းပါဝင်သည့် Gebze လည်းပါဝင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။Halkalı 76 အကြား 285 ကီလိုမီတာ [ပို ... ]
Kocaeli တလျှောက်လုံးအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသည် Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အီလက်ထရောနစ်အခကြေးငွေကောက်ခံမှုစနစ် (Kocaeli Kart) စနစ်သို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်။ မတ်လ ၁ ရက်တနင်္ဂနွေ (မနက်ဖြန်) တွင် [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၁၉ မတ်လ ၁၉၁၁ Afyonkarahisar ဘူတာ
ယနေ့ ၁၉၁၉ မတ် ၁ နေ့ Afyonkarahisar ဘူတာသည်သမိုင်းတွင်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်တူရကီ Grand National Assembly တွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး Mustafa Kemal Pasha ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ စီးပွားရေးဘ ၀ ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် zide သည်ညှိနှိုင်းမှု၊ လမ်းများ၊ chimps နှင့်ဆိပ်ကမ်းများ၏အခြေအနေသာဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Kocaeli ရှိ Coronary Infusion ကိုမသန်စွမ်းသောအငှားယာဉ်များ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 22 1924 သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ရထားလမ်း
21.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ
20.02.2020/XNUMX/XNUMX တူရကီ coronavirus အစီရင်ခံစာ
အီတလီနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသေခြင်းတရားသည်ယနေ့တွင် ၇၉၃ ခုရှိသည်။
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၆၅ နှစ်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုအထက်
23: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်း ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူခြင်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - Alsancak အဆောက်အအုံများကို Windows ပြုပြင်ခြင်း၊ Denizli နှင့် Hilal အလုပ်သမားများ၏တန်းလျားများပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
Corana ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Ankara ၌ကေဘယ်ကြိုးများဝင်ရောက်နိုင်မှုရပ်တန့်သွားသည်။
Metrobus ဝန်ဆောင်မှုများကို Coronavirus ညှိနှိုင်းခြင်း
1st အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိအကျအရှေ့ Express ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
2020 Dacia Logan MCV ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်း
Kurtalan Express သည် la လာဇစ်တွင်မြေပြိုမှုကြောင့်လွဲချော်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားရထားစနစ်ဒီဇိုင်း Tool ကိုတူရကီအတွက်ရောင်းချမဟုတ်လော
Marmaray နှင့် YHT Expedition နံပါတ်များကိုလျှော့ချသည်